Home News Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Baydhabo (VIDEO qaabkii wax uga dhaceen)
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Magaalada Baydhabo (VIDEO qaabkii wax uga dhaceen)
Dagaal xoogan ayaa maanta ka dhacay Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka baay kaasi oo yimid ka dib markii ciidamo itoobiyaan ah ay xoog ku kaxeeysteen musharax Muqtaar Rooboow cali.
Dad ka careeysan falkaasi ayaa iskugu soo baxay Gudaha magaalada iyagoo sameeyay banaanbaxyo iyo sidoo kale falal kale oo ay uga careeysan yihiin xadgudubka dowlada.
Ciidamada Booliska ee dhawaan la geeyay Magaalada iyo dad taageersan Wadaadka ayaa rasaas kala duwan isweeydaarsaday,waxaan idinsoo gudbineeynaa muqaal muujinaayo sida magaalada wax uga dhaceen.
Previous articleCiidanka Itoobiya oo bilaabay xasuuqa shacabka Baydhabo
Next articleDowladda Federaalka oo sheegtay in ay soo xireen Mukhtar Robow. (Akhriso)
Obituary: Jack McDougall, former council boss who was once caught up...
Dil Naxdin-leh oo Maanta ka dhacay Magaalada Jowhar (FAAH-FAAHIN)